बकिंघम प्यालेस, लन्डनमा शाही भ्रमण | यात्रा समाचार
लन्डन यो धेरै आकर्षणहरु को रूपमा छ किनकि यो एक ऐतिहासिक र धेरै विश्वव्यापी शहर हो, तर कुनै श doubt्का बिना यदि तपाइँको रोयल्टी हो भने तपाइँले यस दृश्यलाई याद गर्न सक्नुहुन्न। बकिंघम पैलेस। सुरुचिपूर्ण बकिhamंघम दरबार।
यो हो रानी एलिजाबेथ द्वितीयको आधिकारिक निवास सहरमा र यो पनि छ युरोपमा केहि शाही महलहरू मध्ये एक आज बसोबास गर्ने। होईन, सबै कुरा जनताको लागि खुला हुँदैन, तर लन्डनको लागि केही विशेष कुरा गर्न पर्याप्त छ।
1 बकिंघम प्यालेस
2 बकिंघम प्यालेस हेर्नुहोस्
दरबार वेस्टमिन्स्टरमा छ र यसको पुरानो भाग १1700०० को शुरुदेखि नै हो।यस शताब्दीको अन्तसम्म राजा जर्ज तृतीयले यो सम्पत्ति किन्न शारलोटको निजी निवासमा परिवर्तन गर्नका लागि किनेका थिए र यसैले यसको नाम परिवर्तन गरियो। रानीको घर.
पहिलो महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू, आकारको हिसाबले, १ th औं शताब्दीमा गरिएको थियो: तीन पखेटा मध्य आंगन वरिपरि देखा पर्‍यो र यसरी सन् १ 1837। मा रानी भिक्टोरियाको सिंहासन ग्रहण गरे पछि अहिलेको दरबार अंग्रेजी राजाको निवास बन्यो। उनको पति, प्रिन्स अल्बर्ट, बाँचिरहेको समयमा, दरबार जीवित थियो, यो कन्डिशन्ड थियो र बल र घटनाहरूको घर बन्न पुग्यो, तर उनको मृत्युपछि रानीले छोडिदिए र महल धेरै वर्षको उपेक्षाबाट गुज्र्यो।
तर बकिंघम प्यालेस कस्तो छ?? छ १०० मिटर चौडा १२० मिटर गहिरो र २ meters मिटर अग्लो। कूल सतह को 77 XNUMX हजार वर्ग मीटर, अन्य प्रसिद्ध दरबारहरू जस्तै सानो म्याड्रिड को शाही दरबार वा रोम मा Quirinal दरबार भन्दा सानो। छ Rooms 775 कोठा कार्यालयहरू, बाथरूमहरू, शयन कक्षहरू र राज्य कोठाहरू, हुलाक कार्यालय, अपरेटिंग कोठा, गहना कार्यशाला, पौंडी पोखरी र सिनेमा बीच।
दरबारको वरपर एउटा विशाल ठाउँ छ ताल सहित बगैंचा। यो लन्डनमा सबैभन्दा ठूलो निजी बगैंचा हो र जहाँ शाही गर्मी पार्टीहरू लिन्छन्। छ Hect hect हेक्टर कुलमा र पाठ्यक्रममा, यसले हेलिप्याड र टेनिस कोर्ट समावेश गर्दछ।
बगैंचामा र दरबारको छेउमा तपाईले फेला पार्नुहुन्छ शाही कैरिज, रोयल मेउज र त्यहाँ मल्ल छ, महलको एक दृष्टिकोण मार्ग जुन १ 1911 ११ मा सम्पन्न भएको थियो रानी भिक्टोरियाको स्मारकको रूपमा, जुन सेन्ट जेम्स पार्क पार गरेर भिक्टोरिया मेमोरियलमा भव्यताका साथ आइपुग्छ। हरेक ग्रीष्म जुलाईमा, हजारौं मानिसहरूलाई बगैंचामा भोजहरूमा भाग लिन आमन्त्रित गरिन्छ र यो यहाँ छ जुन तपाईले गार्डको लोकप्रिय परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ, हरेक दिन अप्रिल र जुलाई बीचमा।
बकिंघम प्यालेस हेर्नुहोस्
को राज्य कोठा दरबार प्रत्येक गर्मीमा दश हप्ताको लागि जनताको लागि खोलिन्छ: जुलाई २० देखि सेप्टेम्बर २,, २०१ 20 को लागि, उदाहरणका लागि), र जाडो र वसन्तमा केहि विशेष रूपमा चयनित दिनहरू।
यी कोठाहरूमा कुन स्थानहरू भेट्न सकिन्छ? को सेतो रेखाचित्र कोठा, सिंहासन कोठा, पोर्ट्रेट ग्यालेरी, बलरूम, भव्य सिँढी, बगैचा, र साथै, गार्डको परिवर्तन हो।
राज्य कोठाहरू सार्वजनिक कोठाहरू हुन् जहाँ रानी र शाही परिवारले आधिकारिक अवसरहरूमा आफ्ना आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्छन्। त्यहाँ छन् १ rooms कोठा तिनीहरू जर्ज चौथाका अनुसार सजावट गरिएको छ र १ th औं शताब्दीमा जोसन नेशले निवासबाट आफ्नो दरबारमा परिवर्तन गरे। जहाँसुकै कलाको कामहरू छन्।
El सेतो रेखाचित्र कोठा यो एक सबैभन्दा ठूलो कक्षा कोठा हो र योaको रूपमा कार्य गर्दछ आधिकारिक स्वागत। यसको सजावट अधिकतर कार्लटन निवासबाट आउँदछ र त्यहाँ सेभेरेस र सेतो निलोमा धेरै सभेरेस पोर्सिलेनहरू छन्। त्यहाँ एक रियसनर डेस्क रहेको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ लुई चौधौं छोरीको हो, रानी अलेक्जान्ड्राको पोर्ट्रेट र एउटा इरार्ड पियानोको साथ। सुन्दर छ। त्यहाँ पनि छ कलाकृति को गैलरी, meters 47 मीटर, क्यानालेटो, भ्यान डाइक, र रुबेन्स द्वारा धेरै कामहरू सहित।
La सिंहासन कोठा यसमा जोन नेशको हस्ताक्षर पनि छ: त्यहाँ सन् १ 1953 XNUMX मा रानी र उनको श्रीमानको राज्याभिषेकको लागि प्रयोग गरिएका सिंहासनहरूको एक जोडी, राज्य चेयरहरू, र अन्य राज्याभिषेकमा र आफैंमा कुर्सीहरू पनि छन्। रानी भिक्टोरियाको सिंहासन। El नृत्य कोठा यो विशाल छ र १ 1855 मा पूरा भएको थियो। आधिकारिक खाना आज यहाँ लिइएको छ तर यसमा सिंहासनहरू पनि छन् जसमा राजा एडवर्ड सातौं र रानी अलेक्जान्ड्राले १ 1902 ०२ मा ताजको मुकुट लगाए।
La भव्य सिढी यो राज्य कोठाको पहुँच मार्ग हो। यो पनि द्वारा डिजाइन गरिएको थियो जन नाश लन्डन थिएटरबाट प्रेरणा लिएर। शीर्ष मा रानी भिक्टोरिया को परिवार को धेरै पोर्ट्रेट छन् र यो स्तब्ध पार्ने छ। प्यालेस गार्डन गर्मीमा पनि खुला छ, यदि तपाईं लेट साँझ भ्रमण गर्नुभयो भने यो सार्वजनिक रूपमा खुला छैन। तपाईलाई विशेष यात्राको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई राम्रोसँग जान्नको लागि किनकि यसमा १ hect हेक्टर छ।
El गार्ड परिवर्तन गर्दै यो एक कन्भ्वाइस शो हो जुन ठाउँ लिन्छ गर्मी को समयमा सोमबार, बुधवार, शुक्रवार र आइतबार बिहान ११ बजे। यसलाई नछुटाउन क्रममा, तपाईं ब्रिटिश सेनाको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि गर्मीमा बाहिर अरू दिनहरू र समयहरू हुन्छन्।
अर्कोतर्फ रोयल मेउज, शाही गेराज जहाँ कार र carriage छन्। यो साइट प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी देखि नोभेम्बर सम्म खुल्ला र तपाईं सुनको गाडी, घोडाहरू, रियाली गाड़ी जुन शाही जुबलीमा प्रयोग गरिएको थियो, पारम्परिक कपडाहरू पनि देख्नुहुनेछ र क्यारेजमा जान सक्नुहुन्छ र फोटो लिन सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, खेलौनाहरू, पुस्तकहरू र भरिएका पशुहरूका साथ स्मारिकाको पसल छ।
अन्तमा, बकिham्घम प्यालेस मा तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ क्वीन्सको ग्यालरी चित्रहरु, दुर्लभ फर्नीचर, सजावटी वस्तुहरु र एक अविश्वसनीय र फोटोग्राफ को ठूलो संग्रह संग। यो वर्षaलियोनार्डो दा भिन्सीलाई समर्पित विशेष प्रदर्शनी, मे २ 24 र अक्टोबर १ between बीच। उहाँको मृत्यु भएको since०० वर्ष बितिसकेपछि, त्यहाँ लगभग २०० चित्रहरू छन्, जुन Le 13 वर्षमा लियोनार्डोको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनी हो।
बकिham्घम प्यालेसका लागि व्यावहारिक जानकारी
त्यहाँ विभिन्न प्रकारका टिकटहरू छन्। प्रत्येक वयस्कको प्याराकीट २ p पाउन्ड हुन्छ, पाँच भन्दा मुनिका बच्चाहरूले भुक्तान गर्दैनन् र त्यसपछि पारिवारिक टिकटहरू (दुई वयस्कहरू र तीन बच्चाहरू) छन्, .१.24० पाउन्डको लागि। १ 61 बर्ष सम्मका बच्चाहरूले १..50० पाउन्ड तिर्छन्।
त्यहाँ कसरी पुग्ने: तपाईं रेल वा मेट्रोबाट यो गर्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » लन्डन » बकिंघम प्यालेस, लन्डनमा शाही भ्रमण